लामो,बाक्लो र कालो कपाल चाहानुहुन्छ ? यसरी प्रयोग गर्नुहोस् अमलाको रस (विधीसहित) | सुदुरपश्चिम खबर
लामो,बाक्लो र कालो कपाल चाहानुहुन्छ ? यसरी प्रयोग गर्नुहोस् अमलाको रस (विधीसहित)
काठमाडौँ । अमला कपाल र छालाका लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। अमलाको रस उत्तम स्वास्थ्य पेय मानिन्छ। अमलाको रस लामो कपालको लागि पनि धेरै फाइदाजनक हुन्छ।
अमलाको रसमा खनिज र भिटामिन पाइन्छ, जुन कपालको वृद्धिको लागि धेरै प्रभावकारी हुन्छ।
अमलामा धेरै पौष्टिक तत्व पाइन्छ, जुन कपालको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। अमलाले लामो र बाक्लो कपाल बनाउन मदत गर्छ। अमलाले बिग्रिएको कपाल र सेतो कपाल लाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।अमलाको रस प्रयोग गर्नाले कपाल चिल्लो र चमकदार हुन्छ। आउनुहोस् हामी कसरी अमवला को जूस प्रयोग गर्ने।
हरेक दिन पानीमा मिलाएर पिउनुहोस् बिरेनुन, गायब हुन्छ ग्यास्ट्रिक
अमलाको रस कसरी प्रयोग गर्ने,
तपाई आफ्नो कपालमा अमलाको रस लगाउन सक्नुहुनेछ। कपालमा अमलाको रस लगाउनुहोस् र १० देखि १ मिनेटसम्म मसाज गर्नुहोस्। मसाज पछि, आमला को रस कपाल ३० देखी ४५ मिनेट सम्म छोड्नुहोस्। यस पछि तपाईंको कपाल शैम्पूले धुनुहोस्। तपाई आफ्नो कपाललाई हप्तामा ३ पटक अमलाको रस लगाउन सक्नुहुन्छ ।
अमलाको रस र कागती
अमलाको रस र कागती दुवै कपालका लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। कागतीमा भिटामिन सी पनि पाइन्छ, जुन कपालको वृद्धिका लागि अत्यन्त प्रभावकारी हुन्छ। एक चम्चा अमलाको रसमा एक चम्चा कागतीको रस मिक्स गर्नुहोस्। अब यो मिश्रण तपाईको कपालमा लगाउनुहोस्। कपाललाई मसाज गरेपछि मन तातो पानीले कपाल धुनुहोस्।
अमलाको रस र नरिवलको तेल
लामो र बाक्लो कपाल को लागी, तपाईं अमलाको को रस र नरिवल तेल को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नरिवल तेलले कपालको लागि आवश्यक प्रोटीन दिन्छ। अमलाको को जुसको साथमा नरिवल तेल मिक्स गरेर तपाईंको कपालमा मसाज गर्नुहोस्। मसाजले कपाल बाक्लो र लामो हुन्छ। ✍️ नयाँ पुस्ता